मेरी वसन्ती प्यारी वसन्ती – Krishna Thapa
कता हरायौ हँ ? इनबक्समा कतै कतै प्रश्नका हरफहरु झुन्डिएका छन । कहिलेकाही कतै पनि केही नगरी त्यतिकै चुपचाप बिन्दास बसे के फरक पर्ला र ? फेरी अलि अलि सन्चो पनि त छैन ।धेरै दिन पछि दौतरीका नेपालियन भेटिए गुगल च्याटमा । कृष्णपक्षको लेखाइ पातलिदै गएको उनको गुनासो थियो, र यो सही थियो । साहित्यिक कथा, कविता र थोत्रा मोत्रा गन्थन बाहेक म के लेख्छु र नेपालियन जी ? अनि आजकल यस्तो सिर्जना(?) पढेर बस्ने फुर्सद पो कसलाई होला र ? गफ मोडियो, ‘हो त नपत्याए हेर्नुस न कसरी ओझेल परे किशुनजीका अगाडी नेपाली भाषा साहित्यका अमुल्य निधि – डायमण्ड शमशेर राणा । नेपाली भाषा साहित्यका लागि उनले छाडेर गएका अमुल्य सम्पत्ति र उनको योगदान के नेपाली मिडियाको चर्चाका लागि अपुग थियो त ? पक्कै थिएन । तर सत्य यो पनि हो कि मिडियाले त्यो पस्कन्छ वा पस्कनु पर्छ, जुन पाठक वा दर्शकले ज्यादा रुचाउछ, त्यो उसको व्यवसायिक धर्म पनि हो ।
फेस्बुक र त्विटर तिर केही मित्रहरुको स्टाटस पढेपछि मलाइ नि यस्तै लाग्यो, श्रष्टाको अवसानपछि पोखिने लोकाचारका झुठा आँसुहरुमा पनि कन्जुस्याइ हुदो रहेछ, भएको देखियो । त्यसो त नेता किशुनजीका महत्ता र सम्मानप्रति कसैको असहमति छैन तर उनका अनगिन्ति समाचार तस्वीर र प्रत्यक्ष प्रसारण समेत गरेर पलपलका खबर प्रकाशन/ प्रसारण भैरहंदा कतिपय वेव साइटले अहिले सम्म मुख पृष्ठमा नै साहित्यकार राणा केवल बिरामी भएको देखि यता उनको देहावसानको खबर अपडेट नै गर्न भ्याएका छैनन् ।
फेसबुकमा मित्र अशोक पार्थिव ले लेखेका छन –
उनको स्टाटस पढेपछि भित्र एउटा साहित्य अनुरागी बाँचिरहेको कृष्णपक्ष पनि प्राभावित भयो ।
म राजधानीमा भर्खर आउँदाका दिनहरु थिए, डायमण्ड समसेरका कृतिहरु अनिता,सेतो बाघ र वसन्ती पढ्दाका ती मिठा क्षणहरु आजपनि सम्झिरहेको छु । उनका कृतिहरु पढ्दा इतिहासको कुनै कालखण्डको सजीव चित्र दृश्यावलोकन गरेझैं या जीवनका वास्तविक घटना पढ़ेझैँ अनुभूत गर्थें म। नेपाली साहित्य आकाशका महान साहित्यकार डायमण्ड समसेर आज हामीमाझ हुनु हुन्न, सदा सदाका लागि विदा भइसक्नु भएको छ, यद्यपि उनका ती अनमोल कृतिहरु हाम्रो साहित्यको भण्डारमा युगौंयुग बाँची रहनेछन, सधै सधै भरी ।
गज़ल मुशायरामा बितेका ती अनमोल पलहरु
डायमण्ड शमशेर का बारेमा जति लेखे पनि सधै कमै हुन्छ -कृष्ण जी ! धन्यबाद यहाँले उठाउनु भएको प्रसंगको लागी ! अनि अशोक पार्थिव तामाङ जी को स्टाट्स लाइ सलुट छ -जसले आफ्नो ओजस्वी शब्द मार्फत टोप पड्काएर सम्मान व्यक्त गर्न चुक्नु भएन !
जमाना संग प्रष्ट किन नहुन ? मैले डायमण्ड शमशेर राणा स्वर्गवासी हुनु भयो भनेर विशेषत नेपालका संचार माध्ययममा सुनेकै छैन् । समाचारका आधा समय कृष्ण प्रसादको फेटिजम गर्न व्यस्त छ ।